Top 50 Free Music dajinta Goobaha Laga Helo and Download Free Music
Waxaad had iyo jeer la yaabi karaan hadii ay jirto hab ay u soo bixi music BILAASH. Jawaabtu waa ay wanaagsan tahay. Oo halkan waa taxane ah oo 50 goobood oo si gaar ah loogu dajinta music free. Waxaan darajo 50 goobood oo sida uu sheegay darajo Alexa, taas oo ay go'aamiyeen caan goobta. Aan hubi iyaga si ay u arkaan taas oo adiga kuu fiican.
Hadda waxaad kala soo bixi kartaa gabayadii lacag la'aan ah Amazon. Amazon ayaa la siiyaa gabayadii lacag la'aan ah maktabadda music ay. Riix halkan si aad u hubiso heesaha oo lacag la'aan ah aad jeclaan doonaa.
# 2. Lugood
Hel gabayadii iyo qaybaha kala duwan ee music isticmaalaya Lugood ah. Waxa kale oo ay bixisaa downloads music free. Tag Lugood Store iyo raadiyo Free on Lugood link hoostiisa ku Quick Links. Markaas waxaad bandhigi doonaa maktabadda weyn ee songs lacag la'aan ah.
In kastoo vimeo waa goobta video ku salaysan, waxay kale oo ay bixisaa downloads music xor ah oo sharci ah oo aad jeclaan doonaa.
# 4. Internet Archive ee Archive Audio
Xooji iyo naftaada fascinates by helo heesaha oo dhan aad jeceshahay adigoo isticmaalaya Archive internetka ee. Dad badan ayaa lahaa, sida xaqiiqada jecel isticmaalaya Archive internetka ee
Xooji iyo naftaada iyahoo isticmaalaya Soundcloud ah. Iyada oo xoogga ku caashaqa oo Soundcloud badan music xad dhejin kartaa oo wadaagto heesaha oo dhan ay jecel yihiin. Dad badan ayaa hubaal jeclaan lahaa in la isticmaalo Soundcloud si ay u soo bixi music sidoo kale.
Mp3skull.comis ayaa mid ka mid ah bixiyaha music ugu waxtarka dadka oo dhan. Waxaa yara sameeyo caashaqi jiray badan music faraxsan oo wuxuu ku raaxaysan karaan. Sidaas, dilaan aad kalinimo ayaa iyada oo ku baashaalo isticmaalaya mp3skull.com iyo sidoo kale download music ka.
Ula dhaqan iyo naftaada raaxeysan iyadoo la isticmaalayo oo booqanaya Last.fm. ah Last.fm ayaa hubaal ka caawin kartaa dad badan heesaha oo dhan iyo noocyo ka mid ah music jecel ay tan iyo markii ay leedahay in ka badan 25 bog oo downloads music free.
Marna ha ka maqnaan fursad ay ku noqon mid ka mid ah dadka ugu horeysay ku dhagaysan kartaa heeso dambeeyay ee fanaaniinta aad jeceshahay iyo sidoo kale iyaga download. IMesh The xad ku siin karaa caawin si kuwa doonaya in ay helaan updates ku saabsan waaxda muusikada.
Naftaada ula dhaqmaan oo ay dhagaystaan ​​oo dhan songs ugu dambeeyay ee fanaaniinta aad jeceshahay iyo guutooyin. Dad badan ayaa lahaa, sida xaqiiqada jecel isticmaalaya Songs ah. PK. Haddii aad rabto in aad hesho oo kala soo bixi qaar ka mid ah heesaha aad jeceshahay 'reebi in Songs ah. PK runtii yahay mid aad u wanaagsan doorasho.
Dila xiiso taasi oo ka naftaada madadaalinta iyada oo la dhageysto heesaha oo dhan aad jeceshahay oo iyaga si fudud u dejisan. Xad DJMaza.com ayaa raali galin lahayd rabitaan aad u music iyo heeso ka mid ah fanaaniinta aad ugu jeceshahay.
Haddii aad u jecel in aad qabatid music u gaar ah markaa waa in aad isticmaasho MP3Juices ah. MP3Juices wuxuu kuu ogol yahay oo dhan isticmaala si ay boostada iyo wadaagaan oo dhan music ah in ay ka dhigay. Waxaa kale oo u ogolaanaya dadka isticmaala badan oo ay ku soo bixi songs u offline loo maqli karo.
# 12. New Album Soo Bandhigtay
Hel updates ku saabsan wax walba oo ku saabsan warshadaha music iyo heeso dambeeyay ee fanaaniinta aad jeceshahay iyo guutooyinkiisa oo isticmaalaya Release New Album. Waxa kale oo ay ogolaan kartaa in aad kala soo bixi heesaha oo lacag la'aan ah.
Si aad u sooro oo taasi oo ka qabi karto in SoundClick dila xiiso. SoundClick The xad ku siin karaan gargaar aad si aad dhegaysan kartaa heesaha oo dhan aad jeceshahay ka dib markii duuban.
Raadinta u il aad u fiican oo ah madadaalada? MyFreeMP3 waa bixiye free music iyo radio online dad badan. Waxa kale oo ay sheegi kartaa waxaad kala soo bixi music for free.
# 15- SoundOwl
Music waa hab aad u wanaagsan oo madadaalo iyo sida therapy ah. Dhagaysiga muusigga u yara farxad iyo madadaalo keeni kartaa in aad noloshaada. Sidaas darted, haddii aad rabto in aad hesho si aad u hesho madadaalo markaas waa habayn ku SoundOwl aad.
Samee noloshaada firfircoon oo firfircoon by laga bilaabo maalinta la songs wanaagsan. Iyada oo la isticmaalayo jamendo aad hubaal ka dhigi doonaa maalin maalin aad u wanaagsan. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa heesaha oo dhan aad jeceshahay adigoo isticmaalaya adeegyada internetka.
Inaad hesho ilo lagu madadaalada dhex PureVolume ah. PureVolumen The xad idin faraxsan oo firfircoon karo. PureVolume ayaa xaqiiqo ah ku siin kara heesaha oo dhan in aad rabto in aad leedahay iyo iyaga kala soo bixi lacag la'aan ah.
# 18- Prostopleer
Raaxeysan iyo aad nolosha ku faraxsan yahay adigoo isticmaalaya Prostopleer ah. Prostopleer ayaa guud ahaan ka dhigi kartaa noloshaada ka xiiso badan iyo firfircooni leh sababtoo ah waxa ay ku siin karaan heesaha oo dhan in aad rabto in aad leedahay iyo inaad kala soo baxdo.
Ma waxaad u raadinaya ah music bixiyaha online oo ku siin kara download free of songs? Haddii ay haa tahay, ka dibna aad tahay si nasiib badan maxaa yeelay Music Free ah Archive hubaal ku siin karaa caawin in aad si. Waxay kaa caawin karaan inaad kala soo bixi heesaha oo dhan aad rabtid in aad si bilaash ah.
# 20. Song jeclaa
Music caashaqi jiray, sida xaqiiqada ah jeclaan lahaa inuu ka soo bixi heesaha ay jecel yihiin lacag la'aan. Waa hagaag, kuwii ku caashaqi jiray song badan yihiin kuwo aad u nasiib leeyihiin SongsLover sababtoo ah SongsLover iyaga ku siin karaan waxa ay doonayaan in ay helaan.
Ku bilow adiga oo maalin xaq, waana ku faraxsanahay dhex ARTISTdirect ah. ARTISTdirect The xad sameeyaan dad badan oo ku faraxsan by siiyo heesaha oo dhan in ay rabaan in ay yeelan karaan. Waxay bixisaa download free ah heesaha oo dhan in aad rabto in aad leedahay.
Dila xiiso by 'reebi in mp3lemon ah. Mp3lemon ayaa xaqiiqo ah raali galin lahayd rabitaan aad u heli lahayd download songs aad ugu jeceshahay. Iyada oo la adeegsanayo dhagaysto heesaha oo dhan aad jeceshahay aad ka dhigto nolosha ku faraxsan iyo waxyiga karo.
Samee ambiance gurigaaga ama xafiiska by 'reebi in mrtzcMP3.net ah. Isticmaal songs ee radio online sidii aad soo jeeda halka sameeyo qaar ka mid ah shuqulladaada. Dhageysiga heesaha aad jeceshahay baabiin karta walaaca iyo vibes xun.
Saar cadaadiska iyo vibes kale negative ay dhagaystaan ​​heesaha aad jeceshahay adigoo isticmaalaya NoiseTrade ah. NoiseTrade waa radio online ah oo aad siin karaan heesaha oo dhan in aad rabto in aad leedahay oo maqla.
Noqo lover music isticmaalaya MP3.com ah. MP3.com ayaa si fiican u siin kara oo dhan heeso iyo qaybaha music kala duwan oo aad ay doonayeen in ay ka soo dejisan iyo. Dhageysiga heesaha aad jeceshahay si xaqiiqo ah u shaqayn kartaa sida aad bi'iya stress.
# 26. Music addict
Noqo lover music ah iyada oo Music addict ah. Noqo ah xamaasadeysan oo Music addict. Music xamaasadeysan oo waxay ku xad ku siin kara heesaha oo dhan in aad rabto in aad leedahay. Dad badan ayaa hubaal jeclaan lahaa in ay heesaha ay jecel yihiin iyada oo Music addict ah.
Tuur stress in aad maskaxda iyo jirka iyada oo dhagaysiga muusigga iyo heeso aad jeceshahay. Iyada oo la adeegsanayo dhagaysto heesaha aad jeceshahay in aad maskaxda iyo jirka dareemi kartaa nasashada.
Samee noloshaada ka badan firfircoon oo xiiso leh iyada oo la dhageysto heesaha aad jeceshahay iyo noocyo ka mid ah music isticmaalaya Mp3Raid ah. Mp3Raid ayaa xaqiiqo ah ku siin kara oo dhan heeso iyo noocyo ka mid ah music in aad rabto.
Uu dhib helo heesaha oo dhan aad ugu jeceshahay? Nasiib wanaag, MP3 Download Ming ayaa kaa caawin karaan in aad xaliso dhibaatada. Archives wuxuu kuu ogol yahay dadka isticmaala badan inay muusikada lacag la'aan.
Captivate iyo naftaada ula dhaqmaan dhex maqlay music wanaagsan iyo heeso aad ugu jeceshahay. MP3Fusion ayaa hubaal ka dhigto nolosha ku faraxsan iyo firfircooni karo. Waxay ku siin karaan oo dhan updates ee waaxda muusikada.
Naftaada iyo awood u hesho heesaha oo dhan aad jeceshahay iyada oo ay bixiyaan AirMp3 u download xorta ah. AirMp3 The xad samayn kartaa maalinta ku helno hab aad bixinta heesaha oo dhan in aad rabto in aad maqashaan.
Ku dar farxad iyo in aad nolosha iyada oo la dhageysto heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo noocyo ka mid ah music ee Mp3Pal ah. Mp3Pal ayaa hubaal kaa caawin kara inaad kala soo bixi heesaha oo dhan aad jeceshahay lacag la'aan ah.
Raadinta gabay? Mar dambena ma walwalin sababtoo ah Seekasong.com ku siin karaan gargaar aad u doonaya si aad u hesho heeso aad ugu jeceshahay. Dhageysiga heesaha aad ugu jeceshahay waa hal hab oo aad samayn karto si aad ku raaxeysan maskaxdaada iyo jirkaaga.
# 35. Diyaaradaha dheer
Waxay leeyihiin nasasho ka caajis iyo daal joogtada ah nolol maalmeedka iyada oo ka qabi karto in MadeLoud ah. MadeLoud ayaa hubaal kaa caawin kara inaad kala soo bixi, oo maqla heeso aad jeceshahay lacag la'aan ah.
Ma waxaad tahay lover music ah? Haddii ay sidaas tahay, markaa waa in aad ka maqnaan t isticmaali ArtistServer ah. ArtistServer wuxuu kuu ogol yahay dadka isticmaala si ay u abuuraan isaga ama iyada u gaar ah playlist. Dad badan ayaa jeclaan lahaa hubaal radio this online.
Kac oo u dabaal quruxda nolosha ee codka wanaagsan iyo music ordi. Samee noloshaada firfircoon oo xiiso leh iyada oo dhawaaqa qabow iyo muusikada ee Hippomp3.com ah.
Samee noloshaada mar walba ku faraxsanahay in ay ka qabi karto Mp3Vube ah. Mp3Vube ayaa hubaal ka dhigi karaan in aad nolosha ka midabo badan iyo firfircooni oo macneheedu yahay in aad bixinta heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo music.
# 39aad Naijamusic
Dila xiiso iyo idin nolosha ka xiiso badan iyada oo la dhageysto heesaha aad jeceshahay iyo music. Kor u dhawaaq wanaagsan waa hal hab oo aad samayn kartaa in aad la kulanto farxad iyo nolol farxad.
Ku dar midab si aad nolosha taasi oo ka isagoo intaas ku daray codka wanaagsan in aad noloshaada. Epitonic ayaa hubaal ka caawin kartaa dad badan si ay u helaan oo soo bixi heesaha oo dhan iyo music jecel ay. Music Good waa wanaagsan yahay jirka dadka.
Ku dar farxad iyo midabka si ay noloshaada MP3 O iyada oo loo marayo. Dhageysiga music wanaagsan ku siin kara Raaxo iyo madadaalada in aad noloshaada. Dad badan ayaa jeclaan lahaa hubaal radio this online.
Dabaal quruxda nolosha iyada oo codadka wanaagsan iyo music. Mp3Detective The xad ka dhigi kartaa noloshaada farxad iyo qanacsan. Dhawaaqa Good iyo music hubaal ku dari kartaa qurux iyo midab in aad noloshaada.
# 44aad BeSonic
Waayo aragnimada quruxda nolosha ee haysta codadka wanaagsan iyo music. BeSonic ayaa si fiican u ku siin karaan awood ay ku soo bixi heesaha oo dhan aad jeceshahay lacag la'aan ah. BeSonic ku dari kartaa midabka si aad nolosha adiga oo lagu siinayo awood u leh in ay dhagaystaan ​​heesaha aad jeceshahay iyo qaybaha music.
Ciribtirka vibes iyo stress xun dhex gelinaya dhawaaqa wanaagsan in aad noloshaada. Hubaal CCTrax waxay ku siin karaan awood ay ku soo bixi heesaha oo dhan aad jeceshahay lacag la'aan ah oo ka kaaftoomi lacag la'aan ah.
Live si buuxda loo marayo naftaada u jideeyay la dhawaaqa wanaagsan iyo music. MP3Fresh ayaa awood siinaysa in aad si aad u hesho heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo qaybaha music wanaagsan. Dhageysiga heesaha aad ugu jeceshahay waa hal hab oo ay u helaan nasasho.
Badbaadinta waqtigada iyo dadalka doonaya in heesaha aad ugu jeceshahay. Stopaudio.com waa mid ka mid ah idaacadaha ugu fiican online in aad isticmaali karto si aad si fudud u helo heesaha oo dhan aad ugu jeceshahay. Waxa kale oo saamaxaya kuwa isticmaala inay heesaha oo dhan ay jecel yihiin lacag la'aan.
Mp3-downloads.info ayaa kuu soo bandhigi karaa doorashooyin aan xad lahayn oo ah gabayo aad ugu jeceshahay. Iyada oo waxan online waa la xoojin doonaa si aad u hesho heesaha oo dhan aad jeceshahay oo aad u hesho lacag la'aan ah.
Marna ha u doonaya inay helaan heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo music wanaagsan gelin ka liidato. Dhageysiga dhawaaqa wanaagsan waa hab dad badan ka qaban kartaa si aad u hesho nasasho iyo madadaalo.
Sida loo Download Soundcloud Free Music (3 hababka)
> Resource > Music > Top 50 Free Music dajinta Goobaha si Download Music for Free